काठमाडौं । ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेका बेला मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) को ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ । २७ ओटै वाणिज्य बैंकहरूले बिहीवार छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
सनराइज र सानिमा बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएका छन् । सनराइजले १ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंकले भने विप्रेषणमार्पmत आउने निक्षेपमा १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विप्रेषणमार्फत आउने निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुरूप पनि बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
सामान्य बचतमा दिइने ब्याजदर पनि बढाएर ६ दशमलव ५२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । एनएमबी बैंकले सामान्य बचत खातामा सो बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले सामान्य बचत खाताहरूमा ४/ ५ प्रतिशतको हारहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
एकल अंकमा आयो निक्षेपको ब्याजदर[२०७८ कार्तिक, ५]
बैंकमा निक्षेप संकलन बढ्दो[२०७८ कार्तिक, ४]
२ महिनामै साढे ७ अर्बको पाम तेल निर्यात[२०७८ असोज, ३१]
[Sep 17, 2021 02:59am]
नेपाल राष्ट्र् बैक र नेपालका वाण्ज्यि बैकहरुको मिली भगतमा नेपाली ठग्ने वा लुत्ने यो क्रियाकलाप दशकौदेखी चलिआएको चलन हो नेपालको । जव अलिकता बैकहरुमा तरलता हुन्छ भएभरको पैसा लगानी गर्छ वा वाण्ज्यि बैकहरुकले सिन्डिकेत गरेर वा सबै बैकहरु मिलेर पैसा अभाव भएको नातक मन्चन गरेर थोरै बचतमा अधिक ब्याज दिन्छ र भन्छ पूजी संकलन लगतमै बढीब्याज दिएसी लगानीमा बढीब्याज लगाउन आवश्यक भएको ठहर गर्दै सम्पूर्ण लगानीमा चर्को ब्याज असुल गर्ने गर्दछ बैकहरु । मानौ १० खर्ब US डलर बराबरको नेपाली पैसा महाकाली परियोजना नेपाल आफैले एकल निमार्ण गर्ने भनेर ५००% बार्षिक ब्याज दिन्छु भनेर आहवान गर्देमा के नेपालमा यो पमिाणको पैसा संकलन हुन्छ ? भयको सबै पैसहरु आम मान्छेहरुले बैकमा अघिदेखीनै जम्मा गरिराखेको छदै छनी । के चामल दाल तरकारी किन्न छोडेर सबै पैसा बैकमा जम्मा गर्ने भनेको हो नेपालका बैकहरुले ? यसमा हुने भनेको पहिले देखीनै मुद्दतीखाता रहेको पैसा एक बैकबात अर्को बैकमा जाने मात्र हो । जय होस् नियामक निकाय नेपा राष्ट्र् बेकको ।